အာဆီယံ- အာရှ ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးကော်မရှင်အဆင့်မြင့် မူဝါဒဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကို Video Conferencing ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ် – FERD
အာဆီယံ- အာရှ ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးကော်မရှင်အဆင့်မြင့်…
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလ ၁၉ရက်၊ နေပြည်တော်
အာဆီယံ- အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးကော်မရှင်(ESCAP) အဆင့်မြင့် မူဝါဒဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၁၉ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ၉:၃၀ နာရီမှ ၁၂:oo နာရီအထိ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် BuildingaResilient ASEAN Economic Community in the Aftermath of Covid-19 ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အာဆီယံဒေသတွင် Covid-19 အပြီး ကြံ့ကြံ့ခံနိုင် စွမ်းရှိ သော အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း တည်ဆောက်ရန်အတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည့် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ ၊ အာဆီယံဒေသ၌ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးမြင့် ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်များ ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းစေရေးနှင့် အာဆီယံဒေသအတွင်း လျင်မြန် သော စီးပွားရေးနလံထူမှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရေးတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညိှနှိုင်းဆွေးနွေးပါသည်။
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲ၌ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ စက်မှုနှင့်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Tran Quoc Khanh ၊ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Dato’ Lim Jock Hoi နှင့် ESCAP မှ အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး Ms. Armida Salsiah Alisjahbana တို့က အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ အဆင့်မြင့်စီးပွားရေး အရာရှိများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ESCAP မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် အာဆီယံအဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအရာရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဦးသန်းအောင်ကျော် ဦးဆောင်သည့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁)မှ ပါဝင်တက်ရောက်ပါသည်။
Category: သတင်း မေ 20, 2020
PreviousPrevious post:(၂/၅၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံအဆင့်မြင့် စီးပွားရေးအရာရှိများအစည်းအဝေး နှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများကို Video Conferencing ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်NextNext post:ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကုန်သွယ်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ၏ အကြိမ် (၃၀) မြောက်အစည်းအဝေးကို Video Conference ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်